Ny fandikana bebe kokoa momba ny mety Galaxy S6 dia tonga | Androidsis
Mandika bebe kokoa ny Samsung Galaxy S6
Omaly izahay mampiseho famoahana sasantsasany amin'ny Galaxy S6 miaraka amin'ny fonony manaraka ny fipoahan'ny tsaho inona ireo tonga saika isan'andro ao amin'ity sainam-pirenena vaovao ity avy amin'ny orinasa koreana Samsung.
Ny fandikana vaovao asehoy anay akaiky kokoa hoe inona ity telefaona vaovao ity antsoina hoe Galaxy S6 ary avy amin'izany no antenaina ny zava-drehetra. Farafaharatsiny fanovana vitsivitsy izay tena mampiavaka azy amin'ireo olan'ny taona lasa. Na dia tsy mamela antsika ho sadaikatra toa ireo fivoahan'ny vaovao HTC One M9, mampitombo ny faniriana hahita ny famolavolana ny Galaxy S6 vaovao izy ireo. Famolavolana izay efa azo ampifandraisina tsara nefa raha tsy mahita ny tena endriny dia mbola tsy afaka mino ny tenantsika ihany isika.
Mpanome ary manome bebe kokoa
Ny sainam-pirenena vaovao an'ny orinasa Koreana Vaovao an-jatony matetika no tonga mandra-panolorany azy amin'ny hetsika Unpacked isan-taona. Androany isika dia manana fandikan-teny vitsivitsy izay mampiseho zorony boribory tsara, io no lantom-peony amin'ny endrika apetraka amin'ny Galaxy S6 vaovao raha toa ka marina ireo sary ireo.
Izay azony dia ho fitaovana miaraka amin'ny tsipika famolavolana manavakaTsara sy kanto, zavatra andrasan'ny mpankafy Samsung. Na dia nanamboatra tsipika sy fiolahana vitsivitsy aza ireo mpamorona an'ity renders ity izay zara raha nisy nahita teo amin'ny terminal Samsung natomboka tato anatin'ny taona lasa.
Raha tsy izany ihany Mbola fantatra hatrany amin'ny sary tena izy fa hitondra antsika ny Galaxy S6 vaovao. Herinandro 2 mahery dia ho vavolombelona avy amin'ny Samsung ilay Galaxy S6 vaovao miaraka amin'ny vaovao sy ny endriny rehetra ary io volavola antenaina fa tena izy io ary fiovana miharihary amin'ny volan'ny telefaona. Farafaharatsiny mba inona ilay Galaxy S2 taloha, telefaona iray lehibe izay nitarika an'i Samsung hivoaka amin'ny Android. Mihena ny isany ary mihena koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Mandika bebe kokoa ny Samsung Galaxy S6
MEOOOOOOOOOOOOO! dia hoy izy:
Ny tapany ambany dia mitovy amin'ny IPHONE 5!
Felipe Jimenez Diaz Granados dia hoy izy:
Xperia Z3 sy iPhone 6 sisiny?
Valiny tamin'i Felipe Jiménez Díaz Granados
«« Manavaka ny tsipika famolavolana ... »
Slidelock, fampiharana fanidiana hidin-trano azo zahana miaraka amin'ny Material Design
[Video] Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 amin'ny Android Lollipop ofisialin'i LG